Norway oo Soomaalida qasab ku celinaysa | Somaliska
Dowlada Norway ayaa doonaysa in Soomaalida sharciga loo diiday in ay qasab dib ugu celiyaan Soomaaliya qaasatan Muqdisho iyo deegaanada ku dhow. Isbuuci la soo dhaafay ayaa waxaa shir qarsoodi ah magaalada Muqdisho ku yeeshay xogyaha madaxtooyada Norway Pål Lønseth iyo wasiirka arimaha gudaha Soomaaliya Abdisamad Mo'allin Mohamud kuwaasoo ka wada hadlay celinta Soomaalida. Norway ayaa hada qorsheynaysa in Soomaaalida qasab loogu tarxiilo Soomaaliya iyadoo aysan horey toos ugu celin jirin Muqdisho. Qaabilaada dadka la celinayo ayaa u muuqata mid ay dowlada kumeelgaarka Soomaaliya dhabarka u dhigatay. -Waxaan dooneynaa in aan qasab dadka ugu celino Soomaaliya. Waxaan sidoo kale taageereynaa mashruucyo lagu hormarinayo dib u dhiska wadanka, ayuu Pål Lønseth u sheegay wakaalada wararka AP. Wali lama shaacin xiliga ay arintaan bilaaban doonto balse haddii ay dhacdo ayay u badantahay in wadamo kale ay raaci doonaan wadada Norway. Qaasatan wadanka aan ku noolnahay ee Sweden kuwaasoo aan iyaga laftoodu Soomaalida toos u celin balse haddii Norway samayso ayaa laga yaabaa in ay sidoo kale sameeyaan. Soomaalida ayaa ugu badan dadka magan galyada ka dalbada Norway. Sanadkii 2011 ayaa waxaa Norway iska dhiibay 1422 qof oo Soomaali ah.
Dowlada Norway ayaa doonaysa in Soomaalida sharciga loo diiday in ay qasab dib ugu celiyaan Soomaaliya qaasatan Muqdisho iyo deegaanada ku dhow. Isbuuci la soo dhaafay ayaa waxaa shir qarsoodi ah magaalada Muqdisho ku yeeshay xogyaha madaxtooyada Norway Pål Lønseth iyo wasiirka arimaha gudaha Soomaaliya Abdisamad Mo’allin Mohamud kuwaasoo ka wada hadlay celinta Soomaalida.
Norway ayaa hada qorsheynaysa in Soomaaalida qasab loogu tarxiilo Soomaaliya iyadoo aysan horey toos ugu celin jirin Muqdisho. Qaabilaada dadka la celinayo ayaa u muuqata mid ay dowlada kumeelgaarka Soomaaliya dhabarka u dhigatay.
-Waxaan dooneynaa in aan qasab dadka ugu celino Soomaaliya. Waxaan sidoo kale taageereynaa mashruucyo lagu hormarinayo dib u dhiska wadanka, ayuu Pål Lønseth u sheegay wakaalada wararka AP.
Wali lama shaacin xiliga ay arintaan bilaaban doonto balse haddii ay dhacdo ayay u badantahay in wadamo kale ay raaci doonaan wadada Norway. Qaasatan wadanka aan ku noolnahay ee Sweden kuwaasoo aan iyaga laftoodu Soomaalida toos u celin balse haddii Norway samayso ayaa laga yaabaa in ay sidoo kale sameeyaan.
Soomaalida ayaa ugu badan dadka magan galyada ka dalbada Norway. Sanadkii 2011 ayaa waxaa Norway iska dhiibay 1422 qof oo Soomaali ah.
Wamaqlay arintaan waxaase layaableh ninka dhan o wasiirka ah o sidaas udhaqmaaya shilimaan yar ayaa heer kaas gaar siiyay muxuu uhayaa soomaalida kuwii umadaxda u ahaa ayaa colaad iyo gaajo kabixi waayay muxuu karabaa kuwa naftoda lasocararay o dhibaatada soomaray waxaaso miiran baa madax noo ah o wax magarata
waa arin laga xumaado in Dib Qaxootiga loogu celsho wadan aan wali kala Dambeeyn ka Jirin…
Sareedo arintaan adigeey ku Saameeneysaaa hadii Svergie laga hirgaliyo Coz Sharci la,aaan Darteeeed
jimcaaale Runti wt ka seexatay arinta Mideeynta Reeraha maalmahan warbixin ku saaabsan lagaama haayo ee ha lagaaaa helo war lagu farxo bruh Tack…
Sxb kama seexan balse ma jiraan wax cusub…wixii cusub waan soo qori doonaa insha Allah.
July 5, 2012 at 14:39
sareedo arinka norwey masoo dhaweeneesaa adoo wax walba soo dhaweeya ayaan ogaaye ?
abaayo Fatima waligaaa iska ilaali in qof aad iska dhaliishid,,,,, Jimcaale aqoon uma lihi lakiin dad badan ayuu wargalin u sameeya ,,,,,
War farxad leh hada ayey kasocata idacada halaga firsado wasirka,socdalka aya ku qudbenoyo arimaha familada iyo basaborada madama balantu ey ehet julaaay,guuuul
July 5, 2012 at 16:30
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk qof walbo wuxuu doonuu shegaya
hänäd somääli says:
July 5, 2012 at 17:58
nasib xumada somaliya heeysataa ilaah unbaa kasarikara mooye sikstaa eey iskugu jilciyaa ajanibta eey usoo magan galyadoontoo kama sarikaraan wada ugu dhaw aya ah in eey rabi talada saartan si eey dhibaatad kaga baxaan in alaala iyo ntee eey isku jil cinayaan midaan damqasha aqoonin waligeed soalida sidaan ayeey ahaaneeysa allooow wadankii nabad wartaa dib ugu sooceli
somali wareersan says:
waa arin aad u fiican in dadka la cesho, weliba anaga ayaa diyaar ah ah waana soo dhoweynaynaa
Wasiirka Arimaha Gudaha Somalia oo ku Qarxiyay Dawlada Norway kana diiday in xoog lagu soo celiyo Somaalida aan Sharciga laheeyn ee ku nool dalkaas (Daawo Muuqaal ahaan)
Wasiirka arimaha gudaha Somalia Mr.C/samad Macalin Maxamuud oo ku sugnaa maalmahaan dambe dalka Norway ayaa markii ugu horeeysay waxa uu shaaca ka qaaday in aysan jirin warar sheegayay in uu halkaas u joogo sidii loo celin lahaa Soomaalida Sharciga aan heeysan ee ku nool dalka Norway.
Wasiirka ayaa la kulmay dhoor Wasaaradood oo ka tirsan dawlada Norway waxaana ka mid ah mida Arimaha gudaha,Wasaarada Cadaalada iyo sidoo kale Wasaarada Qorsheeynta. Qaar ka tirsan dadka Soomaliyeed ee Sharci la´aanta ku ah dalka Norway ayaa shaki balaaran ka muujiyay qorshaha Wasiirka waxeeyna dadkaas qaarkood u qaateen in uu Wasiirka sahlayo sidii xoog loogu celin lahaa Soomaalida Sharcidarada ku joogto dalka Norway .
” Waa been abuur warka la isla dhex marayo mana naga suurtoowdo inaan dadkeena dhibaateeysan meel cidlo ah ku daadino inta xoog lagu soo aruuriyo,Dad la soo celiyo iska daayee Dawlada Norway waxaan kala hadalnay in la caawiyo kuwo iminka ku sugan gudaha Norway ee la leeyahay Soomaali ma tihiin waxaana sidoo kale kala hadalnay in la xushmeeyo Waalidiinta Soomaaliyeed ee Caruurtooda sida aan cadaalada aheeyn looga qaadanayo ayuu yiri Wasiirka arimaha gudaha Somalia Mr.C/samad Macalin Maxamuud ”
Halkaan ka Daawo Cadeenta Wasiirka oo ku qarxiyay Dawlada Norway oo sheekadaan ula timid
Jaraaidka VG ayaa qoray in Xisbiga shaqaalaha ee AP uu doonayo in Soomaalida aan sharciga lahayn qasab loogu celin doono Soomaalia waxaana arintaan shaaciyay Paul Lonseth oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha kana socda wasaarada cadaalada Norway.
Wasiirka ayaa balan qaaday in aysan marnaba aqbali doonin dad Soomaaliyeed oo xoog lagu soo celiyo wuxuuna sheegay in dhoor wadan oo kale ay dib ugu celiyeen Qaxootigii xooga lagu soo celin rabay kana diineen arintaas foosha xun .
Hadalka Wasiirka arimaha gudaha Somalia Mr.C/samad Macalin Maxamuud wuxuu shakigii ka saaray dadka Soomaaliyeed ee uga shakisnaa in uu jiro qorshe Dawlada Norway iyo Wasiirku ku doonayaan in xoog looga masaafuriya dalkaas dadka aan Sharciga heesan .
Fatima walaal waamaxay wadada isoogashay walayabe hada kahor waxaad raadineysey qabiil kayga marna waxa an qoro ayad kumash quulsantahay marar badan waad iriyaaqdaa walaal wax laga xishoodo aya jira hadii an qaldanahay isheeg waxa an kuqal danahay o isax waakaqadana lkn iskada hadalada anshax darada ah adooraliy xabibti soodhawow
Saredo1 ma jimcaala mise,,,,,,,,,,,,?
sareedo baayo raali ahoow mindhaa waa mid kale qabiil maba warsado dadkaaniga waaba arimaha aan suulin lahaa hadaan awoodo ee hadaad dhibsatay raali ahoow waa un kula kaftmaayay adoo dhawr jeer leh waan soo dhaweenayaa qoraalada baan ogaa 1000 jeer raali baayo
July 5, 2012 at 21:30
run sheeg maxuu qarxiyay wasiirka?qaraxu sooma aheen wax bam bo iyo waxyaalahaas
fatima weligaa ha igu qarxinin malgu dhihin miyaa? qofyahey caadi iska dhig masaajidka cayaarta kadaa kkkkkk
July 5, 2012 at 23:08
run sheeg paltker weyn kkk
acdirahman shekh dahir says:
insha allah yaa wxa loo arkin dadka alle u dhow wax ey doonan ayee heli doonaa hana ku tahstaan wanag xumaantan alle aya ka dhooraayo in sha allah kheyr ayee ku dhamandoontaa
July 6, 2012 at 21:52
kkkkkkkkkkkk fadumo iyo sareedo mala isla qabaa horta wax badan baan arkay iyagooo is haysteeee
July 6, 2012 at 22:52
jay jay kkkkkkk ba.aaa
July 7, 2012 at 03:22
Asc wallala yaal warkas wax kama jiraan laga sheegaayo norway wasiirka ayaan idaacad ka shegay ineysan jirin war ka soo baxay dowlada norway marka waa hadala been abuura somalidaan waa iska war badan yihin marka yaan loobixin
Shucayb…. waa axadii lasoodhafay kkkkkkkkkk
July 19, 2012 at 05:33
salan sare dhaman asxabta salaan kadib kuwaan dowlad isku sheegaa oo soomaali hala soo celiyo dhahaya ayagaba yabane maxey hayaan hadaladooda qashinkaa yaan loo bixin norway anaa kunool cid cid xoog ku lehna ma jirto ama cid cid xoog ku celin karto thanks All of u salamaat
September 26, 2012 at 09:37